Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF 7.6.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.6.3 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
ယခုပင်လျှင်ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်း 90 သန်းအသုံးပြုသူများအခမဲ့သည်နောက်ဆုံးသတင်းများကို Android ရုံး App ကိုရယူပါ။
•ထောက်ပံ့ file format: ကို DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT နှင့် PDF ကို။
•စသည်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အာရဗစ်, ဂျပန်, ရုရှား, ဂျာမန်, အီတလီ, စပိန်, အပါအဝင် 18 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာစကားများပံ့ပိုး
• Polaris Drive ကိုတစ်ဦးက default, မိုဃ်းတိမ်ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သော Google Drive ကို Dropbox, Box ကို, OneDrive အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါကအခြားသောမိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
• Polaris Office ကိုယခုမှသာအထက် KitKat ကို 4.4 နဲ့ထောက်ခံပါတယ်။
ကို Compact - သာလျှင် 60 MB အထိအရွယ်အစား။ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားလုံလောက်ရုံတစျခုလျှောက်လွှာ။
•သင်သည် installed တဦးတည်းဟာ android ရုံး App က, ဖွင့်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဤကဲ့သို့သောစကားလုံးအဖြစ်ရုံးဖိုင်များကိုအားလုံး type ကိုကယ်တင်, excel နဲ့ PowerPoint နိုင်ပါတယ်။
•ဘောပင်များနှင့် pointer features တွေနှင့်အတူဆလိုက်၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးမိုဘိုင်းတင်ဆက်မှုကိုခံစားပါ။
နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ - Microsoft Office, PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို & Converter နှင့်အတူအပြည့်အလိုက်ဖက်တဲ့။
•ထိုကဲ့သို့သော Microsoft Word ကို Microsoft က Excel, စာရင်းဇယား Microsoft က PowerPoint, ဆလိုက်များနှင့် Google Docs အဖြစ်အားလုံးဖိုင် Format ကိုဖွင့်။
•ကြည့်ရန် PDF များညာဘက်သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းမှနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ၏အခြားအမျိုးအစားကနေ PDF files တွေကိုအဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။
ကို Creative - လက်ရေး input ကိုနှင့်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုမြှင့်တင်ရန်, သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေပါ။
• Draw နှင့်သင့်ကိုယ်လက်နှင့်သင်၏စိတ်ကူးကိုတည်းဖြတ်။ သငျသညျအမှန်တကယ်စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်သော်လည်းသကဲ့သို့သင်တို့ screen ပေါ်မှာရေးလိုက်ကြစို့။
•တိုက်ရိုက်, စာရွက်စာတမ်းများမှကင်မရာကိုကနေဓါတ်ပုံတွေကိုယူသို့မဟုတ်သင့်မှာ Android ဖုန်းမှဗီဒီယိုထည့်ပါ။
Connect ကို - လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာ Access ကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းနှင့်မဆိုစက်ပစ္စည်းအတွက်။
• Desktop ကို, Tablet ကိုနှင့် Android ဖုန်းတူသောအားလုံး devices များရဲ့တစ်ဖက်မှာ, Polaris Drive ကိုသို့မဟုတ်အခြားမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်အစဉ်အမြဲ Up-to-date ဖြစ်အောင်သင့်ရဲ့အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများထားပါ။
•အစွမ်းထက်ရှာဖွေရေး function ကိုမရမယ့်ဖိုင်အမည်ကသင့်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများကိုချဲ့ထွင်ရန်သင်၏အချိန်ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် - ပြီးတော့အလွယ်တကူသင့်ရဲ့စိတ်ကူးဝေမျှသင့်လက်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်မှတ်စုရေး။
•ကိုယ့်ရိုးရှင်းစွာကို SMS, အီးမေးလ်, Facebook နှင့်အခြားလိုင်းများကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Cloud သိုလှောင်မှုနဲ့အတူစာရွက်စာတမ်းများ၏ link ကိုမျှဝေ။
•ချက်ချင်းပင် PDF files တွေကိုသင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုချန်ထားပါကထွက်ပုံနှိပ်မတိုင်မီတည်းဖြတ်မူဆွေးနွေးရန် In-app ကိုဆက်သွယ်ရေးရန်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
• Polaris Office ကို All-In-One ရုံး suite ကိုအခမဲ့ပေမယ့်တချို့ features တွေသင်၏မိုးတိမ်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်သင့် subscription ကို option ကိုအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားစေနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းပိုမို features တွေကိုသုံးနိုင်သည်, polarisoffice.compricing အပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး
•သင်သည် ပို. ပင်ပရီမီယံလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အားသာချက်ယူဖို့အတွက်စမတ်စီမံကိန်း ($ 3.99 လ & $ 39,99 တစ်နှစ်) သို့မဟုတ် Pro ကိုစီမံကိန်း ($ 5.99 လ & $ 59,99 တစ်နှစ်) အားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ (စျေးနှုန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်အခြေခံသည်။ အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းတစ်ဦးချင်းစီနိုင်ငံများတွင်ငွေကြေးအပေါ် မူတည်. ကွဲပြားလိမ့်မည်။ )
•သင်သည် $ 4.99 အဘို့ကြော်ငြာ Remove purchasing ခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
•ထပ်နေသည့်ပွဲများငွေပေးချေမှုနှင့်အစီအစဉ် subscriptions ကိုအလိုအလျှောက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားအလိုအလြောကျပြည့်ကြလိမ့်မည်။
•သင်သည်သင်၏ subscription ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုပါလျှင်နောင်လာမည့်သက်တမ်းတိုးနေ့စွဲမတိုင်မီ 24 နာရီအတွင်းသင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုမဆိုအချိန်ကိုပယ်ဖျက်ပေးပါ။ subscription ဖျက်သိမ်းခြင်း Store က App ကိုအသေးစိတျစာမကျြနှာသို့မဟုတ် Google Wallet က Play ဂူဂဲလ်အတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ (ကိုးကား: support.google.compaymentsanswer6220303?hl=en)
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Android ကို SD ကဒ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖတ်နေသည့်အခါဤအခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
• READ_EXTERNAL_STORAGE: ဒီခွင့်ပြုချက်ကို Android SD ကဒ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုတည်းဖြတ်သို့မဟုတ် SD card ကိုတခြားသိုလှောင်မှုအတွက်စာရွက်စာတမ်းရွေ့လျားလာသောအခါလိုအပ်ပါသည်။
• YouTube ကို: youtube.comuserinfrawareinc
•ပံ့ပိုး: [လျှောက်လွှာ] - [Settings များ] - [ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု] သို့မဟုတ် [တရားဝင်ဆိုက်ကို] - [ပံ့ပိုးမှု]
• Privacy & သတ်မှတ်ချက်များကို: www.polarisoffice.comprivacy
tmy18 စတိုး 43 25.09k
APK ဗားရွင္း 7.6.3